DRC: waxa Félix Tshisekedi iyo Joseph Kabila ay ku heshiiyeen deynta Gécamines - JeuneAfrique.com - SAAXIIBADA RAADADA
DRC: waxa Félix Tshisekedi iyo Kabila ayaa isku raacay Gecamines deynta - JeuneAfrique.com
Coronavirus: Air France oo wajaheysa tallaabooyinka taxaddar ee waddamada ...
Tani ma tilmaanbaa in mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ...
Coronavirus wuxuu jebiyaa xawaaraha Aasiya ee shirkadaha diyaaradaha ...
Waxaa la aasaasay sanadkii 1964, Bangiga Horumarinta Afrika (AfDB) waa hay'addii ugu horreysay ee horumarinta Afrika. Hadafkeedu waa in kor loo qaado koritaanka dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ee qaarada oo dhan. Bangigu wuxuu leeyahay 80 waddan oo xubin ah, oo ay ku jiraan 54 dal oo Afrikaan ah (waddamada xubnaha ka ah gobolka) Barnaamijka Horumarinta Bangigu wuxuu ujeedadiisu tahay inuu bixiyo taageerada maaliyadeed iyo farsamada ee lagama maarmaanka u ah mashaariicda isbeddelka oo si weyn hoos ugu dhigi doona saboolnimada kobaca dhaqaale ee loo dhan yahay oo waara ee Afrika. Si aad diiradda u saarto ujeeddooyinka Istaraatiijiyadda tobanka sano (2013-2022) iyo in lagu gaaro saameyn ballaaran oo xagga horumarka ah, shan meelood oo waaweyn (Sare 5), oo waxqabadyada ay ku qasbanaan doonaan in lagu xoojiyo Afrika, ayaa la aqoonsaday , kuwaas oo ah: tamarta, beero-warshadaha, warshadeynta, is-dhexgalka iyo horumarinta tayada nolosha dadweynaha Afrika. Bangigu wuxuu qorsheynayaa inuu aasaaso koox maareyn oo si guul leh u tijaabin doonta hirgelinta aragtidan.
Madaxweynaha ayaa qorsheynaya, kormeeraya isla markaana maareynaya howlaha kooxda Bankiga. Iyada oo la raacayo jihooyinka Agaasimayaasha, Madaxweynuhu wuxuu hagiyaa arrimaha Bangiga Horumarinta Afrika iyo Sanduuqa Horumarinta Afrika, wuxuuna maamushaa howlaha iyo howlaha si waafaqsan heshiisyada aasaaska Bangiga Horumarinta Afrika iyo Sanduuqa Horumarinta Afrika. . Madaxweynuhu wuxuu kormeeraa waaxyo iyo cutubyo dhowr ah, oo ay ku jiraan Xafiiska Madaxweynaha (PRST.0), Xafiiska Wada-shaqeynta iyo la-dagaallanka Musuqmaasuqa (PIAC), Xafiiska Hanti-dhowrka Guud (PAGL), Agaasinka Maareynta Khatarta Kooxda (PGRF), La-talinta Sharciga Guud iyo Adeegyada Sharciga (PGCL), Waaxda Isgaarsiinta iyo Xiriirka Dibadda (PCER), Xafiiska Wada Shaqeynta Shaqada iyo Anshaxa (PETH) iyo Xafiiska Xoghayaha Guud iyo Xoghaynta Guud (PSEG).
Xafiiska anshaxa ayaa mas'uul ka ah duulista, hubinta maareynta arrimaha anshaxa iyo soo saarista fikradaha iyo talo ku saabsan anshaxa Maamulka iyo xubnaha shaqaalaha iyo bixinta Taageero ka hortagga, yareynta iyo xallinta arrimaha anshaxeed si ay gacan uga geystaan ​​maamul wanaagga ka dhex jira Bangiga, iyo in la ilaaliyo sumcadda, sumcadda iyo sumcadda Hay'adda. saadaalin, karaamayn iyo eex la'aan.
Xafiiska anshaxa wuxuu u shaqeeyaa si madaxbanaan mana soo wargaliyo sarkaal kasta, waax, xafiis ama waax kale oo abaabulan ee Bankiga. Si kastaba ha noqotee, arrimo xagga maamulka ah awgeed, wuxuu warbixin u gudbiyaa Madaxtooyada oo uu warbixin u gudbiyaa Madaxweynaha. Baaxadda faragelinta Xafiiska Anshaxa ayaa ku xaddidan xubnaha shaqaalaha mana u sii gudbi doono shaqaalaha la soo doortay, kuwaas oo qodobo gaar ah lagu dabaqi karo.
Madaxa Unugga - Xafiiska Anshaxa ayaa mas'uul ka ah bixinta maareynta iyo la xiriirka aragtida dhammaan arrimaha la xiriira anshaxa iyo arrimaha la xiriira shaqaalaha Bangiga. Wuxuu talo siiyaa oo ka caawiyaa qaybaha kala duwan ee Bangiga horumarinta shuruucda iyo xeerarka khuseeya iyo sidoo kale tilmaamaha ku saabsan dhaqamada iyo anshaxa anshaxa. Waxay sidoo kale mas'uul ka tahay hubinta aasaaska iyo dayactirka dhaqanka anshaxa ee ka dhex jira shaqaalaha iyo maamulka, iyo sidoo kale ka hortagga dhaqanka anshax darrada ah, iyadoo si joogto ah loo hagaajinayo hababka la xiriira iyo kormeerka.
Sida ku xusan kormeerka tooska ah iyo jihada Madaxweynaha Bankiga iyo kormeerka shaqeed ee Madaxa Shaqaalaha, Madaxa Qeybta - Xafiiska Anshaxa (PETH), waxay qaban doonaan howlaha soo socda:
Mas'uuliyadaha gaarka ah ee la xiriira shaqada:
1. Qaadato maareynta guud oo qeexdo aragtida iyo istiraatiijiyadda ku saabsan barnaamijyada anshaxa iyo waafaqsanaanta;
2. Maareeya qaybaha ugu muhiimsan ee anshaxa iyo barnaamijka waafaqsanaanta bangiga, oo ay ku jiraan qiimeynta halista, horumarinta siyaasada, tababarka, isgaarsiinta, kormeerka, qiimeynta iyo horumarinta barnaamijka;
3. U adeegso xogta si loo qiimeeyo isbeddelada loona raaco waxqabadyada lagu dabaqi karo si loogu taliyo hagaajinta ku habboon istiraatiijiyadda iyo barnaamijyada;
4. U adeega khabiir ku xeel dheer arrimaha anshaxa iyo u hoggaansanaanta heerarka anshaxeed ee lagu qeexay Xeerka Anshaxa Shaqaalaha, ka caawiya xubnaha shaqaalaha inay fahmaan waajibaadka anshaxeed, caddeeyaan aagagga ay ka jiraan iskahorimaad ama isku dhac dhici kara oo la aasaaso. talooyinka, si looga hortago ku xadgudubka xeerarka anshaxeed kahor muuqashadooda;
5. Hubinta in loo hoggaansamo Xeerka Anshaxa Shaqaalaha si loo hubiyo u hoggaansanaanta joogtada ah ee nidaamka anshaxa ee Bangiga;
6. Sameynta iyo joogtaynta dhaqan anshaxeed oo la jaan qaada heerarka ugu sarreeya xagga maamulka hay'adda;
7. Waxay kormeerayaan hirgelinta, dib u eegista iyo istiraatiijiyadda isgaadhsiinta si loogu hoggaansamo nidaamka daahfurka macluumaadka Bangiga; iyo in sidaas la sameeyo, gaar ahaan in laga caawiyo kooxda maamulka iyo xubnaha shaqaalaha sidii loo dejin lahaa loona horumarin lahaa dhaqan ay aqbali karaan, heer hay'ad, in si deggan loo wajaho su'aalaha akhlaaqda;
8. Kala tali shaqaalaha iyo maamulka arrimaha la xiriira khilaafaadka danaha ee ku lug leh Bangiga, ha ahaadaan shaqsi ahaan, xirfadlayaal ama abaabul, oo u soo jeedi talooyinka maamulka sare siyaasadaha iyo tilmaamaha la xiriira halkaa, meeshii ay ku habboon tahay;
9. Diyaarinta saldhig asaasi u ah aqoonta isla markaana qeexdid qodobbada muhiimka ah ee lala xiriirayo si loo bixiyo tababar korna loogu qaado wacyiga shaqaalaha ee arrimaha la xiriira mabaadi'da iyo anshaxa maamulka hay'ad heer Bank.
10. Kula tali maamulka sare, agaasimaha waaxda maareynta kheyraadka aadanaha (CHRM) iyo xubnaha kale ee shaqaalaha ee ku saabsan fulinta xeerarka anshaxa; qabtaan kulanno macluumaad iyo barnaamijyo tababar si kor loogu qaado wacyiga arrimaha anshaxa; iyo
11. Kula tali shaqaalaha iyo maareynta falalka sababi kara anshax xumo.
Hawlo faahfaahsan oo la xiriira mas'uuliyadaha ku xiran shaqada:
12. Samee meel lagala xiriiro oo la yeelo si aad u bixiso talo qarsoodi ah iyo hagitaan ku saabsan anshaxa iyo dhaqanka waxyaabaha ay xubnaha shaqaaluhu u adeegsan karaan cabsi la'aan aargudasho;
13. Hubinta in aqoonta la taaban karo ee sharciyeynta quseeya iyo arrimaha anshaxa, xeerarka anshaxa xirfadleyda, shuruucda caalamiga ah iyo qawaaniinta, shuruucda xirfadleyda ama anshaxa warshadaha, iyo farsamooyinka xallinta khilaafaadka anshaxa la ilaaliyo;
14. Soosaara barnaamijyada u hoggaansanaanta anshaxa iyo sidoo kale heerarka anshaxa iyo anshaxa si loo oggolaado hoggaanka sare iyo fulinta / iyo kormeerka;
15. Abaabullo tababaro iyo wacyigelin shaqaalaha, maamulka iyo daneeyayaasha kala duwan;
16. Isku duwida wacyigelinta iyo nashaadaadka waxbarashada si kor loogu qaado, iyo waxyaabo kale, qiyamka Bangiga, heerarka akhlaaqda iyo nidaamka iyo in si wanaagsan loogu yaqaan iyada oo loo marayo jiheynta iyo barnaamijyada tababarka iyo sidoo kale '' qaab kale oo isgaadhsiin ah oo si joogto ah loogu xoojiyo dhaqanka anshaxa ee howlaha Bangiga;
17. Caawinta maaraynta sameynta talooyinka siyaasadaha iyo tilmaamaha iyada oo la raacayo aagagga cusub ee isbeddelaya ee anshaxa hab dhaqanka hay'adda, iyo horumarinta iyo baahinta ku dhaqanka ugu wanaagsan;
18. Qaado mas'uuliyadda shaqaalaha, istaraatiijiyadda, miisaaniyadda iyo barnaamijka shaqada ee Xafiiska Anshaxa; iyo
19. Maareeya khadka tooska ah ee akhlaaqda / khadka caawinta si aad ubixiso talo ku saabsan qiyamka anshaxeed, iyo in la hubiyo horumarinta isgaarsiinta gudaha iyo dibadda, xeer anshaxeed iyo dukumiintiyo kale iyo qalab loogu talagalay maareynta arrimaha anshaxa; iyo
20. Kormeerida iyo hirgelinta istiraatiijiyadda iyo qorshayaasha cutubyada agabyada aadanaha.
21. Madaxa waaxda waxaa laga rabaa inuu ku dhaqmo sirta adag ee quseysa macluumaadka loo siidaayay howshiisa.
22. Xafiiska anshaxa wuxuu hayaa diiwaangelin qarsoodi ah oo ku saabsan fikradaha uu sheegayo iyo warbixinnada uu helo.
23. Madaxa waaxda wuxuu u gudbiyaa maareynta warbixin sanadeed taas oo loo heli karo xubnaha shaqaalaha oo ay kujirto dulmar guud oo ku saabsan howlaha xafiiska, isagoo cadeynaya tirada iyo guud ahaan su'aalaha su'aalaha la keenay iyo gunaanadiisa. in la jiiday sanadkii la soo dhaafay.
24. Diyaarso oo u soo bandhiga warbixinno xilliyeed iyo isgaarsiin laxiriirta daneeyayaasha iyo shaqaalaha mowduucyo kala duwan oo la xiriira anshaxa iyo waafaqsanaanta.
Xirfadaha: (shahaadooyinka, khibradda iyo aqoonta)
1. Ugu yaraan haysto Master ama diblooma u dhigma anshaxa, maaraynta kheyraadka aadanaha, horumarinta ururada, cilmu-nafsiga shaqada, sharciga, cilmiga bulshada, maamulka ganacsiga, maareynta qeybaha bulshada, cilmiga dhaqanka ama gudaha edbin la xidhiidha.
2. Muujiya ugu yaraan sagaal (9) sano oo waayo-aragnimo ah oo la xiriira adeegsiga heerarka anshaxa sare iyo hufnaanta shaqsiyadeed.
3. Khibrad adag oo xagga anshaxa ah oo laga dhex helay hay'ado caalami ah ama ururo waaweyn oo dhinacyo badan taabanaya ayaa noqonaya faa iido dheeraad ah.
4. In ay isku muujiyaan samaynta, kormeerka iyo dhiiri-gelinta kooxaha ka mas'uulka ah hirgelinta mudnaanaha istiraatiijiyadeed iyo hawlgallada.
5. Khibrad u leh horumarinta istiraatiijiyadaha, siyaasadaha, barnaamijyada iyo tilmaamaha xarumaha waaweyn.
6. Leh awood la hubo oo lagu hirgaliyo mashruucyo cusub iyo dadaallo howlo kala duwan iyo deegaanno kala duwan.
7. Hayso rikoor aan caadi aheyn oo ku saabsan daacadnimada, daacadnimada, xirfadeed, caddaalad iyo anshax shaqsiyeed.
8. Hayso rikoor la hubo oo ku saabsan dhismaha iskaashiga iyo / ama dhisidda shabakadaha ka baxsan hal meel oo khibrad leh, oo leh xirfado maareyn khilaaf badan.
9. Yeelo xiriir wanaagsan iyo xirfado shaqsiyadeed oo aad kuwada shaqeyn karto koox iyo iskaashi.
10. Leh xirfado la xaqiijiyay oo ku aaddan hirgelinta habab hal abuur leh oo hal abuur leh oo saameyn ku leh dhaqanka urur ama dhaqan si aad macaashka uga hesho Bangiga iyo macaamiisheeda.
11. Hesho aqoon qoto dheer oo ku saabsan anshaxa iyo u hoggaansanaanta shuruudaha hawlgallada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
12. Horey u soo xaqiiqsadeen iyaga oo u shaqeynaya si xirfad leh iyo dibloomaasiyiin ah dad fara badan oo ka kala yimid dhaqammo kala duwan.
13. Muuji karti la soo bandhigay si loo madax-bannaanaado iyada oo la muujinayo khiyaano iyo hal-abuurnimo xagga falanqaynta iyo xallinta dhibaatooyinka; ku kalsoonow inaad ka shaqeyso heerarka hay'adaha oo dhan.
14. Inuu aqoon fiican u leeyahay siyaasadaha, nidaamyada iyo dhaqangelinta hawlgallada ururada waaweyn ee laba geesoodka ah iyo kuwa dhinacyada badan leh.
15. Si fiican u isticmaal barnaamijyada caadiga ah ee Microsoft Office Suite (Erey, Excel, Access iyo PowerPoint, SAP iyo / ama nidaam kale oo dukumiinti dukumiinti ah oo isku dhafan).
16. Awood u leh inaad si wax ku ool ah ula xiriirto (qoraal iyo ku hadal) Ingiriis ama Faransiis, waxaana doorbidan inaad si fiican u leedahay aqoon shaqo oo wanaagsan oo ku saabsan luqadda kale.
Isku xirka arjiga: https://www.afdb.org/fr/vacancies/chef-dunite-bureau-de-lethique-25738
VN Heat of Unit - Xafiiska Anshaxa 20190611Fr (1)
Vela: Chicharito ee LA: "waa saxiix weyn qof walba"
Coronavirus: Air France waxay la kulantay tallaabooyin taxaddar leh oo ka yimid waddamada Bartamaha Afrika - ...
Tani ma waxay tahay tilmaan in mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee Apple ay noqon karto ...
Coronavirus wuxuu jabiyaa xawaaraha Aasiya ee duulimaadyada Afrika - Da'yar ...
"Waa inaan abuurnaa sharciga madaniga ah ee Afrika" - Alhousseini Diabaté, martida…